Kedu ka esi emepụta plywood na-enweghị formaldehyde? Ngwongwo ogwe osisi na-amasị ndị na-eri ihe n'ihi nnukwu arụmọrụ ya na ọnụahịa ya, ọdịdị ya bara ọgaranya na nkwekọ na mgbakọ. Ogwe osisi bụ isi ihe eji eme ụlọ, gụnyere fibreboard, particleboard a ...
Ngwongwo Vietnam na ngwa ahia ngosi 2020
Peonywood bụ onye ngosipụta nke VIFA-EXPO 2020 (Vietnam International Furniture and Home Accessories 2020), a ga-eme EXPO na Machị 2020, mana n'ihi COVID-19, emegharịrị ya rue Ọgọst ma ọ bụ Septemba 2020. Mana agbanyeghị, Peonywood ga-agharịrị gaa na EXPO. Ọ bụ ezigbo ohere maka anyị ...
Peonywood na-esonye na 126th Canton Fair
Peonywood were sonye na 126th Canton Fair 2019 mgbụsị akwụkwọ. All ngwaahịa melamine chere ihu plywood, mbukota plywood, elu àgwà film chere ihu plywood, MDF osisi, A ọkwa LVL maka ụzọ Ndinam na kabinet Ndinam, osisi ala na-acha ọcha ntekwasa LVL nwere nnọọ mmasị site mba ọzọ ndị enyi. Peonywood ...